ကလေး ပင်ဂွင်ငှက် Washbasin အလုပ်ရုံ စိတ်ကြိုက် နှင့် လက္ကား - Wahsun နောက်ဆုံးပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မိခင် နှင့် ကလေး ထုတ်ကုန် > ကလေး Washbasin > ကလေး ပင်ဂွင်ငှက် Washbasin
ကလေး လေးအရွက် ကလိုဗာပဲပင် အစာ ခွက်
ကလေး ဝေလငါး Potty
ကလေး ယင်း Potty
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-B က
ခရီးဆောင် anti-စလစ် လေ့ကျင့်ရေး2လှမ်း ပလပ်စတစ် လှမ်း မစင် ဘို့ ကလေးတွေ
ကလေး ပင်ဂွင်ငှက် Washbasin
အဆိုပါ ကလေး ပင်ဂွင်ငှက် wတစ်ဦးshbတစ်ဦးsin ခံယူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖော်ရွေ PP, ဆိုရင်တော့ Mတစ်ဦးtte ခံစား, Non-စလစ်, မြင့်သော အပူအအေး ခုခံရေး, မဟုတ် လွယ်ကူသော သို့ အသက်, နှင့် ရှိပါတယ် တစ်ဦး ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှု ဘဝ။ အဆိုပါ botသို့m ၏ အဆိုပါ wတစ်ဦးshbတစ်ဦးsin ရှိပါတယ် တစ်ဦး stတစ်ဦးble နှင့် Non-စလစ် ပုံစံ နှင့် 3.6 မီလီမီတာ။ Bတစ်ဦးby smတစ်ဦးll ပင်ဂွင်ငှက် wတစ်ဦးshbတစ်ဦးsin နှင့် ခြောသော အနား, ကာကွယ်သည် သင့်ရဲ့ ကလေး's hနှင့်, မြင့်သော quတစ်ဦးlity nubuck crတစ်ဦးft စတိုင်။
ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း:ကာတွန်းဒီဇိုင်း, အသုံးပြုမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ PP, အောက်ခြေအပေါ် 3.6mm မှန်မှန်နဲ့ Non-စလစ်ဒီဇိုင်း။ babyâ့လက်ကိုကာကှယျရာချောမွေ့အနား, အရည်အသွေးမြင့် nubuck ဖြစ်စဉ်ကိုစတိုင်။ , အသုံးပြုမှုအတွက်တာရှည်ခံအိုမင်းရန်လွယ်ကူမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံမဟုတ်။
ကလေး Penguins Washbasin
ပြာအနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်, အဖြူရောင်, ပန်းရောင်, အဝါရောင်
2.Product Feature ကို
1. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ PP, နှင်းခဲခံစားမှု, Non-စလစ်, ထူဒီဇိုင်း။
2. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့, ပါးစပ်-Wide အဆင်ပြေ။
အသုံးပြုမှုအတွက်တာရှည်ခံအိုမင်းရန်လွယ်ကူမဟုတ် 3. မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ,
ပလပ်စတစ်ဧရိယာမှာနှစ်ပေါင်း 20 ထက် 1.More ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်
အကောင်းဆုံးအရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက် 3. ထောက်ပံ့ရေး
4. Flexible ငွေပေးချေမှုလမ်း
5. အာမခံဝန်ဆောင်မှု & အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးထုတ်ကုန်များ
4.Packaging & Delivery & ငွေပေးချေမှုရမည့် Term
50pcs / ctn, PP အိတ် + စက္ဏူထူ
70% မျက်မှောက်မှာတင်ပို့သို့မဟုတ် LC မတိုင်မီအသီးအနှံမတိုင်မီ 30% သိုက်,
ဖြေဒါဟာ MOQ ဘို့, က 15-20 ရက်အတွင်းဖွင့်ခြင်း, ကုန်စည်သင့်ရဲ့အရေအတွက်ပေါ်လျှင်မူတည်ပါသည်။
ဖြေသေချာတာပေါ့, သင်အမြဲကြိုဆိုကြသည်! ကျနော်တို့လေဆိပ်သို့မဟုတ်ဘူတာရုံမှာသငျသညျကောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဖြေကျနော်တို့အနှစ် 20 ကျော်အဘို့တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်စည်ရှိသည်နှင့်အကောင်းဆုံးလို့ပဲ။
ဖြေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ဟုတ်ပါတယ်, စိတ်ကြိုက်လိုဂိုနဲ့ဒီဇိုင်းကိုရရှိနိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။
Q: တချို့နမူနာ get နိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, နမူနာအမိန့်ကိုကြိုဆိုပေမယ့်ကုန်တင်စုဆောင်းနေကြသည်
hot Tags:: ကလေး ပင်ဂွင်ငှက် Washbasin, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, လက္ကား, ပူသော ရောင်းချခြင်း, မူပိုင်ခွင့်, နောက်ဆုံးပေါ်, dueable, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အနိမ့် စျေးနှုန်း
ကလေး တံဆိပ် Washbasin
ကလေး ယုန် Washbasin
ကလေး ခြင်္သေ့သည် Washbasin
ကလေး ဒီနောဆီးယား Washbasin
ကလေး ဝက်ဝံ Washbasin
အဆင်ပြေ ပလပ်စတစ် ခေါက် တောင်း ဘို့ စျေးဝယ်
နေအိမ်အကွောငျး ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်များသတင်းဒေါင်းလုပ်ပေးပို့ မေးခြင်းထိတှေ့ ကျွန်တော်တို့ကို links Sitemap RSS XML